Who are they?: 2008
Get your own at Scribd or explore others: Politics Literature butcher
Shaking7Days of Yangon
Get your own at Scribd or explore others: Literature Religion islam bible
ဗမာပြည်မှ အာဇာနည်များ ( သို့) ပြည်သူ့ အလင်းဆောင်ခွပ်ဒေါင်းများ
တနင်္လာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 17 2008 19:05 - မြန်မာစံတော်ချိန်
စဉ် အမည် စီရင်ချသည့်နေ့ အဖွဲ့အစည်း၊ ပြစ်ဒဏ်
၁၉ ဦးဣသရိယ (ခ) အောင်ကိုငြိမ်း ၁၁ နိုဝင်ဘာ ရဟန်း၊ ငွေကြာယံကျောင်း၊ ၆ နှစ်ခွဲ
၉၈ စည်သူမောင် (ခ) ရာပြည့် ဗကသ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်၊ ၁၁ နှစ်
မကောင်းသတင်းများဖြင့် နာမည်ကျော်ကြား လူကြောက် များနေသော ၀န်ကြီးတစ် ဦးဖြစ်သူ အမှတ် ( ၁ ) စက်မှုဝန်ကြီး ဦးေ အာင်းသောင်း
Posted by yahutha at 2:09 AM0comments
စက်မှု (၁) ၀န်ကြီးဌာနနှင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခဲ့သူ လွယ်ဟိန်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် စိုင်းစံထွန်းနှင့် စက်မှု (၁) ၀န် ကြီးဌာန မြန်မာ့စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတို့ မကြာခင်က စာရင်းရှင်း ကြရာ စိုင်းစံထွန်းဘက်မှ ပေးရန် ငွေကျပ်သန်းပေါင်း (၆,၀၀၀) ကျော် မပေးနိုင်ဖြစ်နေ၏။ သို့သော် စိုင်းစံထွန်း ပိုင်ဆိုင်သည့် Great Myanmar အချိုရည်စက်ရုံ၏ ရှယ်ယာအတော်များများမှာ စက်မှု (၁) ၀န်ကြီး ဦးအောင်သောင်း ပိုင်နေသည့်အတွက် စိုင်းစံထွန်း ကျပ်သန်း ပေါင်း (၆,၀၀၀) ကျော် ပြန်မဆပ်လျှင် စက်မှု (၁) ၀န်ကြီး ဦးအောင် သောင်း မည်သို့အရေးယူမည်ကို ရန်ကုန်စီးပွားရေးလောကမှ စိတ်ဝင် တစား ဖြစ်နေကြ၏။
စင်စစ် စက်မှု (၁) ၀န်ကြီး ဦးအောင်သောင်းသည် အသက် (၇၂) နှစ်ရှိသည့်တိုင် လောဘရမက်အကြီးဆုံး ၀န် ကြီးအဖြစ် ထင်ရှား၏။ အဂတိလိုက်စားမှုတွင် ၀န်ကြီးတကာဝန်ကြီး အားလုံးထက်ပင် သရဖူဆောင်းသည်ဟု နာ မည်ကြီး၏။
အန်အယ်လ်ဒီကို လူထုဆန့်ကျင်ပွဲလုပ်အောင် စတင်ဖန်တီးသူမှာလည်း ၀န်ကြီးဦးအောင်သောင်းဖြစ်၏။ တ ချိန်က ပုဂံလူထုချီတက်ပွဲများလုပ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လူထုရှုတ်ချပွဲပုံစံ ဖန်တီးရန်အတွက် မန္တလေး နန်းတွင်း ရတနာပုံဧည့်ဆောင်ကနေ ဦးအောင်သောင်း ကြိုးကိုင်ခဲ့၏။ ထိုအချိန်က မန္တလေးတိုင်းမှူး ဒု-ဗိုလ်ချုပ် ကြီးရဲမြင့်နှင့် ဦးအောင်သောင်းသည် စစ်သင်တန်း တပတ်တည်းဆင်း ဖြစ်သည့်အတွက် အလွန်ရင်းနှီး၏။ ထို့ ကြောင့် လူထုဆန္ဒပြပွဲများကို စည်းရုံးရန် ဦးအောင်သောင်း မန္တလေးရောက်တိုင်း နန်းတွင်းရတနာပုံ ဧည့်ခန်း ဆောင်ကို အသုံးပြုဖို့ ထိုအချိန်က မန္တလေးတိုင်းမှူး ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်က ခွင့်ပြုခဲ့၏။ သို့သော် နောက်ရောက် လာသည့် မန္တလေးတိုင်းမှူးများက ဦးအောင်သောင်းအား သဘောမကျသည့်အတွက် နန်းတွင်းရတနာပုံ ဧည့် ခန်းဆောင်ကို အသုံးပြုခွင့်မပေးသဖြင့် မန္တလေး ဘီယာစက်ရုံ၊ အရက်စက်ရုံများရှိ ရိပ်သာများ၌သာ တည်းခို ပြီး စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ရ၏။
အစိုးရထောက်ခံပွဲများ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရှုတ်ချပွဲများ ဖန်တီးသည့်နည်းဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ မျက်နှာသာပေးမှုကို ဦးအောင်သောင်း ရယူနိုင်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ လူထုထောက်ခံပွဲများ လုပ်ရာတွင် စက်မှု (၁) လက်အောက်ခံ စက်ရုံများမှ ၀န်ထမ်းများကို အဓမ္မနည်းဖြင့် ချွေးတပ်ဆွဲပြီး အသုံးချခဲ့သည်ဟု သက်သေအ ထောက်အထားများနှင့်တကွ ဦးအောင်သောင်း၏ လက်ထောက်များက ပြော၏။ စက်မှု (၁) ၀န်ကြီးဌာနလက် အောက်တွင် မြန်မာ့အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း၊ မြန်မာ့စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း မြန်မာ့ဆေးဝါးနှင့် အိမ်သုံးပစ္စည်း လုပ်ငန်း၊ မြန်မာ့ကြွေထည်မြေထည်လုပ်ငန်း မြန်မာ့စက္ကူနှင့် ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းနှင့် မြန်မာ့အထွေထွေနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုပြီး ဌာနကြီး (၆) ခုရှိ၏။ ထိုလုပ်ငန်းဌာနကြီး (၆) ခုလုံးပေါ်မှ လုပ်ငန်း များကို မိမိကိုယ်ကျိုးအတွက် ဦးအောင်သောင်း အသုံးချသည်ဆိုပြီး လက်အောက်အရာရှိများက ထုတ်ဖော် ပြော၏။
စက်မှု (၁) ၀န်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ သာပေါင်းပျော့ဖတ်စက်ရုံကို တရုတ်ကုမ္ပဏီ အကူအညီနှင့် တည် ဆောက်ရာတွင် တရုတ်ကုမ္ပဏီက ဦးအောင်သောင်းကို ဒေါ်လာ (၁) သန်း ကော်မရှင်ပေးရသည်ဟု ရန်ကုန် အနောက်တိုင်း သံတမန်များက ပြော၏။
ပုဂ္ဂလိက ဘိလပ်မြေစက်ရုံတရုံတည်လျှင် အရင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၈) သန်း ကုန်ကျ၏။ ထိုအထဲမှ ၀န်ကြီး ဦးအောင်သောင်းကို ဒေါ်လာ (၁) သန်း ကော်မရှင်ပေးရသည်ဟု ခိုင်လုံသည့် သတင်းရပ်ကွက်များက ပြော၏။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပုဂ္ဂလိက ဘိလပ်မြေစက်ရုံ (၈) ရုံ တည်ထားသည့်အတွက် ဦးအောင်သောင်းမှာ ဘိလပ်မြေ စက်ရုံတလုံးဖိုးနှင့် ညီမျှသည့် ဒေါ်လာ (၈) သန်း ကော်မရှင်ရပြီးဆိုသည့် သဘောဖြစ်၏။
လောလောဆယ် သာစည်အရှေ့ဘက် ပြင်ညောင်မှာ ရတနာသိင်္ဂီကုမ္ပဏီမှ ဆောက်လုပ်ပေးနေသည့် ဘိလပ် မြေစက်ရုံမှာ ၀န်ကြီးဦးအောင်သောင်းအတွက် ဖြစ်သည်ဟု စက်မှု (၁) ၀န်ကြီးဌာနတခုလုံး လူသိများ၏။ အ ထူးသဖြင့် စက်မှု (၁) ၀န်ကြီးဌာန လုပ်ငန်းအတော်များများကို ဦးအောင်သောင်းနှင့် ရင်းနှီးသည့် ပုဂ္ဂလိကကု မ္ပဏီ များသာ လက်ဝါးကြီးအုပ် လုပ်ခွင့်ပေးထား၏။ ဥပမာ - ရွှေသံလွင်၊ ရတနာသိင်္ဂီ၊ ကျော်သာ၊ Mother Trading စသည့် ကုမ္ပဏီများမှာ ထင်ရှား၏။ စက်မှု (၁) ၀န်ကြီးဌာန လက်အောက်ခံ စီမံကိန်းများမှ Steel Structure လုပ်ငန်းမှန်သမျှကို ဦးဝင်းလွင်ပိုင် ကျော်သာကုမ္ပဏီ တဦးတည်းကိုသာ ဦးအောင်သောင်းက ကန် ထရိုက်လုပ် ခွင့်ပေးထား၏။
ထိုငတက်ပြားဝန်ကြီး ဦးအောင်သောင်းသည် မကြာခင် မန္တလေးတိုင်း ကြံ့ဖွံ့အသွင်ပြောင်း နိုင်ငံရေးပါတီကို ဥက္ကဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး နောင်ပေါ်ပေါက်မည့် ရုပ်သေးအရပ်သားအစိုးရလက်ထက်တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေ သကြီးအဆင့် ၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ် အရွေးခံဦးမည်။ ထိုသက်ကျားအိုဝန်ကြီး ဦးအောင်သောင်းကို ခေတ်ပြိုင်က အထူးရှုတ်ချသည်။
(၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလထုတ် ခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ် ‘အယ်ဒီတာ့အာဘော်’ မှ …)
ဤပိုစ့်တွင် အချက်အလက်ရှာဖွေစုဆောင်းခြင်း ကို ဥပမာ နေဖြင့် ဖေါ်ပြသွားပါမည်။
ယခင်ပိုစ့်တွင် ဆက်စပ် (လင့်ခ်) တင်ပြခဲ့သည့် http://burmese.dvb.no/news.php?id=6038 သတင်း ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ။ ထိုသတင်းတွင် မိထ္ထီလာ အခြေစိုက် လေတပ် ဗိုလ်တဦးက ၁၉ နှစ် အရွယ် ဆယ်တန်းကျောင်းသား ကလေးအား ဓါးဖြင့်ထိုးသတ်ကြောင်း၊ အလောင်းကို ဝေးလံသောနေရာတွင် မြှုပ်နှံကြောင်း၊ မိသားစုအား ငွေ၁၅သိန်း လျော်ကြေးပေးကြောင်း များ ဖေါ်ပြထားပါသည်။
လူသတ်မှုကိုကျူးလွန်သော ဗိုလ်ကြီးအောင်တေဇာ အမည်ရှိ လေတပ်တွင် အမှုထမ်းဆောင်နေသူသည် ဥပဒေအရ အရေးယူခံရ ခြင်းရှိမရှိ သတင်းမရ ရှိပါ။
ဤကဲ့သို့သောအခြေအနေ မျိုးတွင် ယခုဘလော့ဂ်ကဲ့သို့သတင်းဖြန့်ဝေသူများ၏ အခန်းကဏ္ဍသည်များစွာ အရေးကြီးအသုံးဝင်လာ ပါသည်။
ဗိုလ်ကြီးအောင်တေဇာ သည် အကြီးဆုံးသောရာဇဝတ်မှုကြီးဖြစ်သည့် လူသတ်မှုကို ကျူးလွန်သူ ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ရာဇဝတ်သားဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ အကျဉ်းထောင်ထဲတွင် ရာသက်ပန် နေထိုင်သင့်ပါသည်။
၎င်း၏ ဇနီးသည်ဖြစ်သူ မိထ္ထီလာစစ်ဆေးရုံတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဆရာဝန်အမျိုးသမီးသည် မိမိယောက်ျား လူသတ်သမား၏ အကြောင်းကို သိသင့်သိထိုက် ခွင့်ရှိသင့်ပါသည်။ အဘယ်သူသည် လူသတ်သမားနှင့် ညစဉ် အိပ်ရာဝင် ပျော်ရွှင်ပေါင်းဖက် ဆက်ဆံလိုစိတ် ရှိပါအံ့နည်း။ ထို့အပြင် ၎င်းကိုယ်တိုင်တွင်လည်း အသက်အန္တရယ် စိုးရိ်မ်ဖွယ်ရာ ရှိပါသည်။ (ဗိုလ်ကြီးအောင်တေဇာ သည် ကလေးအလောင်းကို စစ်ဆေးရုံ ရေခဲတိုက်သို့ သယ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ၎င်းသည် ဤကလေးအား ၎င်းကိုယ်တိုင် သတ်ခဲ့ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းသို့ သတင်းပို့ဝန်ခံခြင်းမရှိခဲ့ပါ။)
ဗိုလ်ကြီးအောင်တေဇာ၏ မိဘဆွေမျိုးများသည်လည်း ၎င်းတို့၏ လူသတ်သမား သား အကြောင်းကို သိရှိထိုက်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ချစ်မညီးသော သားအာဇာနည်ဗိုလ်ကြီးသည် အခြားမိဘ တဦး၏ ရင်နှစ်သည်းခြာ အပစ်မဲ့လူငယ်လေးတယောက်အား မောက်မာရက်စက်စွာ ဓါးဖြင့် အသေထိုးသတ် ခဲ့ပါသည်။ အကယ်၍ အခြားသူတဦးက ဗိုလ်ကြီးအောင်တေဇာ အား ဓါးနှင့်ထိုးသတ်ပြီး ငွေ ၁၅သိန်းကို မိဘများအား လျော်ကြေးလာပေးပါက ၎င်းတို့ သည် ကျေကျေနပ်နပ် မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြင့် ထိုငွေများအား ပျော်ရွှင်စွာသုံးစွဲ ပါမည်လော။
ဗိုလ်ကြီးအောင်တေဇာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော မိထ္ထီလာ မြေပြင်အတတ်သင်လေတပ်စခန်းမှ သက်ဆိုင်ရာ အရာရှိအရာခံ များနှင့် မိထ္ထီလာ ပြည်သူ့ ရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိ ရဲအရာရှိ များ အားလုံးသည်လည်း ဤလူသတ်မှုကြီးအကြောင်းကို သိသင့်သိထိုက်ပါသည်။ သို့မှသာလျင် ၎င်းတို့သည် ဗိုလ်ကြီးအောင်တေဇာ အား သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ အရ အရေးယူဆောင်ရွက်သွား နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုအကြောင်းများကြောင့် တာဝန်သိမြန်မာလူမျုိုးများတို့သည် ဤလူသတ်မှုအကြောင်းကို DVB မှဖေါ်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း ထပ်မံ၍ မှတ်တမ်းတင် သတင်းဖြန့် ဝေသင့်ကြပါသည်။
Posted by yahutha at 2:20 AM0comments
အောင်တေဇာ၊ ဗိုလ်ကြီး၊ မိထ္ထီလာလေတပ် Aung Tayza, Captain, Meiktila Air Base
မြေပြင်အတတ်သင် လေတပ်စခန်း (လမတ)
၎င်းသည် အသက် ၁၉နှစ် အရွယ် ဆယ်တန်းကျောင်းသား ကလေးအား ၆ လက္မ ဓါးမြှောင်ဖြင့် နိုဝင်ဘာ ၂ ရက် ၂၀၀၈ က ထိုးသတ် ခဲ့ပါသည်။ ထို ကလေး၏ အလောင်းအား ၎င်း၏ မိန်းမ ဆရာဝန်ဖြစ်သူ အလုပ်လုပ်ကိုင် သော မိထ္ထီလာ စစ်ဆေးရုံသို့သယ်ပို့ ခဲ့ပါသည်။ နောက်တနေ့နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်နေ့တွင် ကလေးအလောင်းအား ဝေးလံခေါင်ဖျားသော လက်ပခေါင်းသုဿန်သို့ပို့ ဆောင်လိုက်ပါသည်။ ၎င်းသည် ကလေးမိဘများအား လျော်ကြေးငွေ ၁၅ သိန်း ပေးခဲ့သည်။
Aung Tayza, Captain
Air Base's Ground Crew Training School
He made an unprovoked attack ona19 year old grade 10 student and stabbed him to death on 2nd November 2008 near the Meiktila Air Base. He then immediately took the body to the mortuary at Meikhtila military hospital where his doctor wife was on duty, and sent it to the faraway cemetery in Latphakhaung district for burial on the following afternoon.
The murdured boy's family was reportedly offered 1.5m Kyat by Aung Tayzar as compensation.
Posted by yahutha at 2:13 AM 1 comments
Posted by yahutha at 12:51 AM0comments
ကြွေ သွားတဲ့ ကိုမျိုးအောင်သန့် အား... ကြွေနေတဲ့ကြယ်..ငိုနေတဲ့လ... (ရေး/ဆို ..အလိမ္မာ japan) သီချင်းဖြင့် ဂုဏ်ပြု လိုက်ပါတယ်
Posted by yahutha at 9:25 PM0comments
Labels: ဂုဏ်ပြု တေး
Posted by yahutha at 3:55 PM0comments
သန်းရွှေသမီးတွေ နဲ့ အလယ်ပိုင်းတိုင်း တိုင်းမှုးကတော်တို့ စိန် နဲ့ေ ရွှ တွေကိုလိုက်လံဝယ်ယူနေ
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးပျက်ကပ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ရွှေဈေး၊ အိမ်ဈေး၊ ဓါတ်ဆီဈေးတွေ ထိုးကျလျက် ရှိပါတယ်။ တောမီးလောင် တောကြောင်လက်ခမောင်းခတ် ဆိုသလို ဒီလို မြန်မာပြည်မှာ ပြည်သူလူထုတွေ စီးပွားပျက်နေချိန်မှာ သန်းရွှေသမီးတွေ နဲ့ အလယ်ပိုင်းတိုင်း တိုင်းမှုးကတော်တို့ဟာ စိန် နဲ့ေ ရွှ တွေကို နေ့စဉ်လို လို အ၀ယ်ထွက်လျက်ရှိ နေတယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့ခံ ရတနာကုန်သည်များက ဆိုပါတယ်။ အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်နေ့ ကလည်း မန္တလေး ၂၂ လမ်းမပေါ်က အောင် သမာဓိရွှေဆိုင်က နေ့ ဝယ်ယူသွားခဲ့ပါတယ်။ သန်းရွှေသမီး တယောက်ဖြစ်တဲ့ သန္တာရွှေ မင်္ဂလာဆောင်စဉ်ကလည်း တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာတွေကိုခိုးယူပြီး ဒေါ်လာ ၅၅ သန်းဖိုးမျှ တန်ဖိုးရှိတဲ့ စိန်တွေကို ၀တ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့မင်္ဂလာဆောင်ဗီဒီယိုကို မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ပြည်သူတွေက ဒေါသအမျက် ချောင်းချောင်းထွက်ခဲ့ရပါတယ်။
Posted by yahutha at 4:05 PM0comments
Posted by yahutha at 2:26 PM0comments
အင်္ဂါနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 21 2008 23:06 - မြန်မာစံတော်ချိန်
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်ပြည်ကြား ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများ ဆောက်လုပ်ခြင်း စီမံကိန်းသည် နိုင်ငံ၏ နှစ်ရှည် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မရရှိနိုင်သည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ထိုစီမံကိန်းကို သေသေချာချာ သတိကြီးစွာ စဉ်းစားသင့်ပါသည်။
ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဒေသမှ မြန်မာပြည်ကို ဖြတ်ပြီး တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ "မူဆယ်" မြို့အထိ ဖောက်လုပ်ရန် အဆိုပြုထားသော ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းသည် စစ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်သော မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အကျိုးကျေးဇူး အနည်းငယ်သာ ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်သော်လည်း တရုတ်နိုင်ငံမှာမူ ထိုစီမံကိန်းမှ အကျိုးအမြတ် ကြီးမားစွာ ရရှိလ်ိမ့်မည် ဖြစ်သည်။
အဆင့်မြင့်အုပ်ချုပ်မှုပိုင်း တခုလုံးကို တရုတ်လူမျိုးများကသာ လွှမ်းမိုးထား၍ တရုတ်များကသာ စီမံခန့်ခွဲမည် ဆိုပါက ထိုပိုက်လိုင်းများ ဆောက်လုပ်ခွင့်ကို မြန်မာနိုင်ငံက ခွင့်မပြုသင့်ပေ။ ကုန်သွယ်မှုကို ဆန့်ကျင်နေစဉ်မှာပင် ထို ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း ဆောက်လုပ်ခြင်းသည် တရုတ်နိုင်ငံအား မြန်မာ့မြေပေါ်တွင် ခိုင်မြဲသော အကျိုးစီးပွား တည်ထောင်ခွင့် ပြုလိုက်သကဲ့သို့ပင် ရှိလိမ့်မည်။ ပိုက်လိုင်းသည် စက်ရုံ မဟုတ်သလို၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတခုလည်း မဟုတ်ပေ။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ထိုကဲ့သို့သော သဘောတူညီမှုမျိုးမှ အကျိုးကျေးဇူး များစွာ ရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ ထိုစီမံကိန်း၏ လုံခြုံရေးအတွက် တာဝန်ယူပေးနေရပြီး ဖြတ်သန်းသယ်ဆောင်ခ အနည်းငယ်သာ ရရှိမည် ဖြစ်သည်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင် မြန်မာနယ်စပ်တလျှောက် ဖြတ်သန်းဖောက်လုပ်မည့် ပိုက်လိုင်းပိုင်းကို မြန်မာနိုင်ငံအား လုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုသင့်သည်။ ဖြတ်သန်း သယ်ဆောင်ခထက် စာလျှင် ထိုသို့သော ချည်းကပ်မှုမျိုးသည် မြန်မာတို့အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများနှင့် နည်းပညာ အကျိုးကျေးဇူးများ ပိုမို ရရှိစေနိုင်ပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် ထိုပိုက်လိုင်းများကို ဆောက်လုပ်လိုပါက မြန်မာနိုင်ငံကို ပိုက်လိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသည့်အပြင် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အကူအညီနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ထောက်ပံမှု၊ လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းထောက်ပံမှုများပါ ပေးအပ်ရမည် ဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ "အမျိုးသားတိုးတက်ရေးနှင့် ပြန်လည်ပြုပြင်ရေး ကော်မရှင်" (NDRC) က စစ်တွေ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းနှင့် ကူမင်းမြို့တို့ ဆက်သွယ်မည့် ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းကို ၂၀၀၇ ခုနှစ် အစောပိုင်းကတည်းက အတည်ပြုခဲ့သော်လည်း မြန်မာစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ အဆင့်မြင့် အရာရှိများနှင့် နီးစပ်သော ရန်ကုန်အခြေစိုက် စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် စီးပွားရေး ပညာရှင်များကမူ ယခုအချိန်အထိ ထိုစီမံကိန်းကို အကောင်အထည် ဖော်ရန် ရှင်းလင်းသော အစီအစဉ် မရှိသေးဟု ပြောကြသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် ချမှတ်ထားသည့် မြင့်မားသော ကုန်ကျစရိတ်များကြောင့် ကျွမ်းကျင်သူရော၊ မကျွမ်းကျင်သူများအတွက်ပါ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအချို့ကို မျှော်လင့်လာနိုင်သော်လည်း ထိုစီမံကိန်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ထင်ရှားသော အကျိုးအမြတ် မရရှိနိုင်ပါဟု အင်ဂျင်နီယာနှင့် ကမ်းလွန် ဖွံ့ဖြိုးးရေးနှင့် အဓိက ဆက်စပ်လျက်ရှိသော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များက ပြောကြသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလျှင် ထိုပိုက်လိုင်းများကို တည်ဆောက်ပြီးသွားပါက ကုန်ကျစရိတ် ၈၀ % ခန့်သည် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများထဲသို့ ဝင်ရောက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ၂၀% သာလျှင် လုပ်သား၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများဘက်သို့ ရောက်ရှိလာမည် ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် စွမ်းအင်အခြေခံ ပစ္စည်းများ လုပ်ငန်းတွင် နည်းပညာ ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးနေသည့် အခြားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တဦးကမူ ထိုစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားသော အမြင်တခု ရှိနေ၏။ ပိုက်လိုင်းသည် တောထူထပ်သော ဒေသများနှင့် တောင်တန်းများကို ဖြတ်သန်းသွားရမည် ဖြစ်သဖြင့် တောင်တန်းများတွင် မြေအောက် လှိုင်ခေါင်းများ ဖောက်လုပ်ပြီးစီးရန် လိုအပ်သောကြောင့် မြန်မာများအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပိုရလာစေနိုင်မည်ဟု ဖြစ်သည်။
သူက ဆက်လက်၍ ထိုစီမံကိန်းအတွက် လုပ်သား ၁၀၀၀ ကျော်လောက် လိုအပ်လာလိမ့်မည်ဟု ပြောကြားသည်။ သို့သော် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း စီမံကိန်းမှာကဲ့သို့ မြန်မာ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို ရောင်းချမည် မဟုတ်ဘဲ၊ တရုတ်-မြန်မာ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းသည် မလက္ကာ ရေလက်ကြားကို ရှောင်၍ အာဖရိကနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့များကို သယ်ပို့ရန် ရည်ရွယ်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင် အုပ်ချုပ်သူ အပေါ်ယံလွှာ၏ အကျိုးကျေးဇူးအတွက် ခိုင်မာသော ငွေကြေးကို ရှာဖွေနိုင်ရန် မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်မဆို ခုန်ပျံကျော်လွှား ပြုလုပ်မည့် မြန်မာအစိုးရ၏ လက်ရှိမူဝါဒသည် မြန်မာလူဦးရေ သန်း ၅၀ ကျော်နှင့် နိုင်ငံတော်အတွက် အကောင်းဆုံး နှစ်ရှည် အကျိုးစီးပွားကို လျစ်လျှူရှုထားခြင်ပင် ဖြစ်သည်။
Posted by yahutha at 3:56 PM0comments
ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု - စီးပွားရေးမဖွံ့ဖြိုးရခြင်း၏ အဓိက လက်သည်လော
အောက်တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၀၈ - နိုင်ငံတခုရဲ့ ပြုမူလုပ်ဆောင်ပုံတွေကို တခြားနိုင်ငံတွေ
က လက်မခံနိုင်တဲ့အခါ၊ ပြောင်းလဲဖို့ တိုက်တွန်း တောင်းဆိုတာတွေကို ဂရုမစိုက်ဘဲ
ကိုယ့်ရဲ့ ပြုမူလုပ်ဆောင်ပုံကသာ မှန်ကန်တယ်ဆိုပြီး ဆက်လုပ်နေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ
တခြားနိုင်ငံတခုချင်းစီကပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အစုအဖွဲ့လိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ် Sanctions လို့ခေါ်တဲ့
ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုတွေကို ချမှတ်ကြလေ့ရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာလည်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတွေအပါအ၀င်
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတချို့က စီးပွားရေးအရ ဒဏ်ခတ် အရေးယူမှုတွေ ချမှတ်ထားပါတယ်။
ဒီလို ချမှတ်ထားတဲ့အပေါ် မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းက မကြာသေးခင်
ကပဲ ကျင်းပပြီးစီးသွားတဲ့ ၆၃ ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံအတွင်း
ပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာ ပြစ်တင် ဝေဖန် ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
Posted by Who are They? at 2:18 AM0comments
Posted by Who are They? at 2:12 AM0comments
Posted by Who are They? at 2:07 AM0comments
တပ်တွင်းမှာ မကြေနပ်မှုတွေ တစ်စထက်တစ်စတိုးပွားလာနေပြီ။ မနေ့ က မင်းလှမှာရှိတဲ့ မြို့ စောင့်တပ် အတွင်း မှာ တပ်တွင်းပုန်ကုန်မှုစတင်ဖြစ်ပွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
တပ်ရင်းမှုးများရဲ့မတရားစေခိုင်းခံရမှု ၊ ဖိနှိပ်ခံရမှု၊ လုပ်ခလစာ မလောက်ငမှုများကြောင့်မကျေနပ်မှုများ တိုးပွားလာပြီး ခုလို ပုန်ကန်မှုဖြစ်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပုန်ကန်မှုကို တပ်ကြပ်ကြီးများက ဦးဆောင် တယ်လို့ သိရတယ်။
တပ်ရင်းမှုးကိုရဲဘော်များက ပြစ်ခတ်သတ်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ပုန်ကန်သောရဲဘော်များဖက်မှ သုံးဦး ကျဆုံး တယ်လို့ သိရပါတယ်။
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေမှုကြောင့်ပြည်ရန်ကုန်ကားလမ်းကိုပိတ်ဆို့လိုက်တယ်လို့ သိရတယ်။ အသေးစိတ်ကို ဆက်လက် တင်ပြပေးပါမယ်။
Posted by Who are They? at 2:03 AM0comments
ယမန်နှစ်က ဘာသာရေးပွဲတခုတွင် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် နေပြည်တော်မှ အရာရှိကြီးတချို့နှင့် ဆုံဖြစ်သည်။ သည်လို ဖြင့် စကားစပ်မိကြရာက ဘုန်းကြီးတွေကို ကန်တော့တဲ့အခါ ခါးမှာချိတ်ထားသော သေနတ်ကို ဖြုတ်ထားသင့်ကြောင်းကိစ္စ ရောက်သွားသည်။
မိတ်ဆွေတယောက်က ရဟန်းတော်များမှာ ၀ိနည်းတော်ရှိကြောင်း၊ "အဂါရ၀ ငါးပါး"ကို ရှောင်ရှားကြရ ကြောင်း၊ အမြင့်မှာ ရှိနေသူ၊ ကျောပေးထားသူ၊ မလေးမစား အမူအယာပြသူ၊ လက်နက်ကိုင်ဆောင်ထားသူ၊ အရိုအသေ မပြုသူတို့ကို တရား မဟောရ၊ အကန်တော့ မခံကြရကြောင်း၊ အကန်တော့ခံမိပါက ရဟန်းတော်တွင် အာပတ် သင့် ရောက်ပါကြောင်း ရှင်းပြသည်။
ဥပမာ ဗိုလ်ခင်ညွန့် အာဏာရှိစဉ်က တရက်တွင် ပဲခူးမြို့မှ စာသင်တိုက်ကြီး တတိုက်သို့သွားကာ ဆရာတော် ကို ဖူးတွေ့ ကြောင်း၊ ထိုအခါ ဆရာတော်က "ငါ့ကိုရှိမခိုးခင် မင့်ခါးက သေနတ်ကို အရင်ဖြုတ်ပါဦး" ဟု အမိန့်ရှိ ကြောင်း၊ ထိုစကားကို ဗိုလ်ခင်ညွန့်က သူ့ကို ဆရာတော်က ရှုတ်ချစကားဆိုသည်အထင်နှင့် ချက်ခြင်းလှည့်ပြန် သွားခဲ့ဖူးကြောင်း ပြောပြသည်။
မသိနားမလည်လို့ပါဆိုပြီး အမှားတခုကို ကျူးလွန်မိလျှင် အကုသိုလ်ကံကတော့ ခွင့်လွှတ်မည် မဟုတ်သည်မှာ သေချာပါ သည်။ အမိအဘကို မသတ်ရ ဆိုသည့် ပညတ်ချက်ကို မသိနားမလည်လို့ဆိုပြီး ကျူးလွန်မိလျှင် ထိုသူ မှာ ကံကြီးထိုက် မည်ပင် ဖြစ်သည်။
အမှန်စင်စစ် ထို "ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇနကံ" ဆိုသည်မှာ မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်အရ သာသနာတော်ထမ်း ရှင်ရဟန်းတို့အား စော်ကားပြုမူလာခြင်းကို နောင်မပြုရဲအောင် ကံဆောင်တားမြစ် ဆုံးမခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
မနုဿတ္တဘာဝေါ ဒုလ္လဘော။ လူ့ဘ၀သည်ရခဲလှပါ၏။ ထိုရခဲလှသောလူ့ဘ၀တွင်၊ မိမိနောင် ရေးအတွက် တတ်နိုင်သမျှ ကုသိုလ်စုဖို့သာ ဖြစ်သင့်ပါသည်။ မိမိသေလျှင် မိမိနောက်သို့ မိမိပြုခဲ့သည့် ကုသိုလ် အကု သိုလ် ကံများသာ ပါသွားကြပါ မည်။ မိမိအတွက်မဟုတ်ပါဘဲ သံဃာကိုသတ်ဖြတ်နေရသည့်အဖြစ်မျိုး ဘယ်သူ့ကြောင့် ရောက် နေရပါသနည်း။ ထိုပုဂ္ဂိုလ် မျိုးအတွက် မိမိမှာ တသံသရာလုံး အနစ်မွန်းခံ ရပေတော့မည်။ ထိုက် တန်ပါရဲ့လား။
ထိုကျူးလွန်နေသူများကို မေးလိုပါသည်။ သင်တို့လူ့ပြည်တွင် နှစ်ပေါင်းမည်မျှ ဆက်လက် အသက်ရှည်နေကြဦး မည်ဟု ထင်ပါသနည်း။ အာဏာတည်မြဲဖို့ဆိုတော့ကော။ ဘယ်နှစ်နှစ်ခံပါ မည်နည်း။ အဲသည့် နှစ်ကလေး အတွင်းမှာ ဘယ်လောက် ချမ်းသာသွားမလဲ။ အဲသည့် ဥစ္စာပစ္စည်းကကော မြဲပါ့မလား။
ဦးနေ၀င်းတသက် စုဆောင်းခဲ့ရသမျှ ဥစ္စာဓနများကိုကော စံစားသွားရပါရဲ့လား။ ဦးနေ၀င်းကိုယ်တိုင် အခြေခံ ဥပဒေ ကြီးတွေအခိုင်အမာဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့သော တိုင်းပြည်ကြီး မရှုမလှ ပျက်စီးခဲ့ရသည်ကို သံဝေဂ ယူသင့် ပါသည်။ အဲသည်တုန်းက သံဃာကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် ပြစ်မှားခဲ့ကြသူများ ဘာဖြစ် သွားကြ ပါသနည်း။
အခုကော ဗိုလ်သန်းရွှေ အာဏာမက်ပြီး သံဃာတော်များကို သတ်ဖြတ်ချေမှုန်းနှိမ်နင်းရေး တွေလုပ်နေပြန်ပြီ။ သူလဲအခု အသက် ၇၄ နှစ်။ နောက်ထပ်ဘယ်နှစ်နှစ်အသက်ရှင်နေဦး မှာမို့လဲ။ ကိုယ်ပြုလိုက်ရသည့် အ ကုသိုလ် နှင့် ပြန် ရမည့် အာဏာတည်မြဲရေး လုံးဝမမျှတ။ အာဏာမှာ မြဲနေယင်တောင် တနေ့မျှ စား ကောင်းခြင်းမစားရ။ အိပ်ကောင်းခြင်းမအိပ်ရ။ အမြဲတန်း ပူပင်သောကဖြင့်သာနေနေရပါမည်။ ရှာဖွေ ရရှိထား သမျှ ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကကော မြဲပါ့မလား။ ပစ္စည်းသင်္ခါရ လူသင်္ခါရ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ရှေ့လူများကို ရက်ရက်စက်စက် ကျူးလွန်ထားမိ ခဲ့ပြီ။ ထိုအကုသိုလ်ကံများကကော ၀ဋ်မ လည်ဘဲနေကြမည်လား။
သည်အာဏာရခဲ့သည့် ကာလတိုတိုကလေးအတွက် အ၀ီစိငရဲမှာ အဆုံးအစမရှိ ကျက်ကြရမှာ မြင်ယောင်သေး သည်။ ဘုရားအလောင်းတော် တေမိမင်းသားကလေးသည် ထိုအပြစ်များကို မြင်သဖြင့် "မင်း" မလုပ်ရအောင် စကား မပြောသည့် အဓိဌာန်ဆောက်တည်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အမှန်ဆို မိမိအာဏာရနေစဉ်မှာ တိုင်းပြည် ကောင်းစားအောင် လုပ်ဆောင်ပေးကြမည်ဆိုပါလျှင် သူတို့ တည်မြဲရေး အတွက် ပြည်သူကပင် ကြိုးပမ်းပေး ကြပါလိမ့်မည်။
ပေးပို့ သော ဘုန်းဘုန်းအားကျေးဇုးပါ။
Posted by Who are They? at 2:24 AM0comments
Posted by Who are They? at 1:27 AM0comments
သံဃာ့ လှုပ်ရှားမှုအား အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲခဲ့သည့် ကြံ့ဖွတ် -စွမ်းအားရှင် စာရင်း
List's of Thugs - UploadaDocument to Scribd
Posted by Who are They? at 1:05 AM0comments
တူရကီ တွင် ကားတိုက်မှုဖြစ်ပွါးရာ..ဗမာ ၁၈ ယောက်သေပြီး ၂၃ ဦးဒဏ်ရာရခြင်း
တိုင်းပြည်မှာ..စစ်တပ်က..ဖိနှိပ်..ရှိသမျှ..ရရာ..ချရောင်းပြီးအိပ်ထဲထည့်. တိုးတက်တဲ့ အီလက်တရောနစ်ခေတ် ထဲ..လျှပ်စစ်မီးကို..အပြင်ရောင်းစား. ပြည်သူက လျှပ်စစ်ကလေးတောင် မရှိ..မှောင်မဲမဲနဲ့နေ။ အလုပ်အ ကိုင် ရှားပါး.စစ်သားဘဲ ကောင်းစားတာ.စစ်သားလုပ် ပြည်သူမသတ်ချင်တဲ့ ဗမာမျိုးချစ်လေးတွေပေါ့. အမျိုး တွေ ငတ်လာတဲ့အခါ. မိသားစု တွေ စားဖို့ရေကြည်ရာ..မြက်နုရာရှာရတာဘဲ။ ဒီလိုနဲ့လူတွေ ခိုးသွင်းတဲ့ ရာဇ၀တ်မှုတွေ နိုင်ငံတကာမှာ များပြားလာရော။
ပင်လယ်ရေပြင်က ခိုးထွင်သူတွေ လှေမြော အစာငတ် သီရိလင်္ကာရေတပ်က ကယ်ထားရတဲ့ သတင်းတွေ. ထိုင်းမှာ မလေးမှာ ကွန်တိမ်နာ အပြည့် လေမွန်းသေရတာတွေ..သေသူပေါင်းများလှပြီ။ အိမ်က ကျန်တဲ့မိသားစု ကတော့ ယောက်ျားသတင်း . သားသတင်း သမီးသတင်း သေသည် ရှင်သည် ဘာမှ မကြားရ..ဒါဟာ ထွက်ပြေးတဲ့လူ အပြစ်မဟူတ်ဘူး။ မနေနိူင်အောင်..ငတ်အောင်ထားတဲ့ စစ်အစိုးရကြောင့်ပေါ့။ ကိုယ်နိူင်ငံကောင်း..ဘယ်သူ အပြင်မှာကျွန်ခံမလည်း။
ကံကောင်းတဲ့သူတွေ လည်း မသေဘူးပေါ့။ ကျရာနေရာနေ ကြုံ၇ာအလုပ်လုပ်..ချစ်ခင်သူတွေနဲ့ ကွေကွင်းတဲ့ ဒုက္ခ ခါးစည်းခံပေါ့။ ပြည်ပ ထွက်ကြ သူတွေဟာ လူငယ်ပိုင်း။ လူလတ်ပိုင်း ငယ်ရွယ်သူ အရွယ်ကောင်းတွေ များပါတယ်။
သန်းရွှေ သူ့မိန်းမ ဖက် အိပ်နေချိန်..တရားမ၀င်ခိုးထွက်သူကတော့ သူတပါးနိုင်ငံမှာ..ကျွန်သာသာ အလုပ် လုပ်။ လမင်းတောင်ငေးပြီး ချစ်သူကိုမလွမ်းနိူင်တဲ့ဘဝ ..စာနာကြည့်ကြပေါ့ဗျာ။
နအဖ နဲ့ သူတို့ ရဲ့ သားမယားတွေကျ..နိုင်ငံဘဏ္ဍာတွေ က ကျခံထားတဲ့ ညစာစားပွဲတွေ မှာ..ခိုးထားတဲ့ blood Ruby တွေ. စိန်တွေ ၀တ်. ပိုးလုံချည် တရွှမ်းရွှမ်း..ဖင်ပြောင်နေအောင်.၀တ်ပြီးရှိုးပြ နေတာ..တရားပါရဲ့ လားဗျာ..
သေဆုံးသူတွေ ကောင်းရာဘုံလားပါစေ ဘဲဆုတောင်းပေးရုံဘဲပေါ့
Traffic accident kills 18, wounds 23 migrants in Turkey
Eighteen people died whenatruck carrying illegal immigrants veered off the road and rolled intoaditch in northwestern Turkey on Sunday,alocal official told the Anatolia Agency (AA).
Twenty-three others were injured in the accident near the town of Malkara in the Tekirdag province, governor Aydin Nezih Dogan told AA.
Most of the victims were immigrants from Burma and officials are trying to identify them and that efforts were underway to assess the nationality of the illegal migrants, Dogan also said.
Posted by Who are They? at 12:47 AM0comments
Posted by Who are They? at 12:40 AM0comments
Inside News - UploadaDocument to Scribd
တပ်မတော်ဆေးရုံကိုတရုပ်ကိုရောင်းလိုက်တော့ သန်းရွေကတော့ စင်္ကာပူဆေးရုံကို ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယဉ်ပျံဝယ်ပြီးသွားတယ်။ တပ်မတော်သား အငြိမ်းစားယူပြီးတဲ့ဗိုလ်မှုးကြီးတွေ၊ လက်ရှိတပ်မတော်သားတွေ ဘယ်ဆေးရုံကိုသွားရတော့မလဲ
Posted by Who are They? at 12:31 AM0comments